Uhlala kuphi uDavid Miller? - Abahamba Ngamabhayisikili
Main > Abahamba Ngamabhayisikili > UDavid millar wamabhayisikili - ephendula imibuzo
UDavid millar wamabhayisikili - ephendula imibuzo
Uhlala kuphi uDavid Miller?
Transcriter: Denise RQ Umbuyekezi: U-Elisabeth Buffard Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu, ngibe nelungelo lokukhethwa iminyaka eyi-16 futhi kufanele ngithi kuleyo minyaka engu-16 angikaze ngilandele umelaphi wezocansi esiteji. (Uhleko) Okungenza ngize lapha ngize ngithi ngifuna ukukhuluma ngokuhlelwa kwedolobha kuyinto ehluke ngokuphelele. Kepha yilokho engifuna ukukhuluma ngakho, futhi ngifuna ukukhuluma ngokuthi sisebenzisana kanjani ukwakha uhlobo lomuzi esikholelwa kuwo nokuthi simchaza kanjani kabusha uhulumeni ukuze ahlangabezane nalezo zidingo.
Ngifuna ukwenza lokhu ngezizathu ezimbili khuluma. Okokuqala, ngoba i-TEDx ingimemele kuyo, kodwa okwesibili, ngoba abantu baseToronto banobungane obumangalisayo kimi njengamanje. Futhi bangimisa kulo lonke idolobha futhi basho izinto ezinhle impela.
Basho izinto ezinjengokuthi, 'Siyakukhumbula!' futhi ngihlala ngithi: 'Nami ngiyakwenza lokho!' (Ukuhleka) Engiqonde ukukusho ukuthi ngikhumbula ukuba neMeya eqhubekayo ehhovisi. (Uhleko) (Ihlombe) Noma ngabe ngicabanga ukuthi basho ukuthini. (Ukuhleka) Kepha uma ngicabanga ngakho, ukuncoma, kepha empeleni umcabango ongafanele.
Ngoba yize kunjalo kufanele sikhethe abantu abafanele uma sizokwakha idolobha esiziqhenyayo ngalo, akukhona nje ukulinda umsindisi oza nathi; akumayelana nomsindisi, kumayelana nathi, futhi kumayelana nokuzibophezela kwethu kuleli dolobha, futhi kubaluleke kakhulu emadolobheni, siphila esikhathini sasemadolobheni. Ngoba amadolobha akuyona into oyisebenzisayo. Ungayithengi, ungayenza.
Futhi ningakwenza ndawonye njengezakhamizi zaleli dolobha futhi njengezakhamizi. Futhi kuyiqiniso kakhulu eToronto ngoba iningi lethu eToronto alizalwanga lapha. Ingxenye engaphezulu nje kwesigamu yazalwa ngaphandle kweCanada, njengami, kanti enye ingxenyenamba ebalulekile ivela kwezinye izingxenye zeCanada.
Futhi empeleni senza iToronto ndawonye namuhla Abantu abavela kwezinye izingxenye zeCanada noma abangazalelwanga lapha bakhethe iToronto. Nganquma ukuhlala eToronto! Eqinisweni, ngakhetha ukuhlala eCanada futhi ngenza izinqumo ezimbili zokuhlala eCanada ngangingenakho okuningi engingakusho ngoba ngangineminyaka engu-8 ubudala futhi kwakungukukhetha kukamama. Kepha ngokwesibili ngibe nezwi langempela.
Kwakungu-1981, ngangiseyunivesithi e-United States futhi ngangingahlala khona. Amathuba angivulela kakhulu futhi ngangingafuni ukuhlala e-United States ngoba umuntu ogama lakhe linguRonald Regan wakhethwa njengomongameli ngaleso sikhathi. Futhi bengifuna ukubuyela eCanada.
Bengifuna ukubuyela ezweni lamanani abiwe, bengifuna ukubuyela edolobheni lapho, njengabaningi bethu, ngakhetha iToronto ngoba kunamathuba, ngoba yidolobha lapho wonke umuntu amukelekile futhi eyiChance yangempela, idolobha eliluhlaza, idolobha elinemizila ehamba ngaphansi, idolobha elinama-trams, futhi ngakhetha iCanada ngenxa yezindinganiso zethu esabelana ngazo. Futhi ngicabanga ukuthi ukubaluleka kwethu okufanayo ukuthi sahlulela umphakathi wethu ngokuthi sibaphatha kahle kanjani labo abancane, hhayi ukuthi sidala izigidigidi ezingaki. (Ihlombe) Futhi kwenzeka kanjalo e-USA ngo-1981.
URonald Regan wakhethwa ngale mantra ukuthi konke okwakumele akwenze ukusika intela futhi konke kuzolunga. Wakhethwa ngesikhathi lapho abantu babebushaya indiva ubufakazi besayensi nosopolitiki abaqavile babesho izinto ezinjengaye ukuthi imvula ene-asidi ivela ezihlahleni, hhayi zonke izikhungo eziphehla ugesi ngamalahle e-Ohio Valley ezicishe zifane nezethu. Futhi bengifuna ukuba lapha.
Ngesikhathi ngifika lapha, ngangifuna ukusiza ekwakheni idolobha ngagcina sengingenela ihhovisi likamasipala ngoba ngangifuna ukuzibandakanya ekwakheni leli dolobha. Futhi leyo yinto yokuqala engicabanga ukuthi kufanele siyenze. Ukuzibophezela.
Kepha kunento yesibili. Futhi lokho kuchazwa kabusha. Futhi ngizongena ngemininingwane ethe xaxa ngakho kokubili, kepha kufanele sichaze kabusha ulimi olusetshenzisiwe lapho sikhulume ngohulumeni bethu nakithi uqobo selokhu uRonald Regan noMargaret That cher, kusetshenziswe igama elilodwa futhi lisetshenziswa yonke indawo chaza thina.
Futhi akulungile ngoba kuchaza kuphela ingxenye encane yethu futhi ngumkhokhi wentela lowo. Uyifunde emaphepheni yonke indawo, abakhokhi bentela bakusho lokho. Kulungile, ngiyakhokha intela, wena ukhokha intela, wonke umuntu ukhokha intela.
Kepha asikho. Singomakhelwane, ngokusho kwesikhulumi sangaphambilini singabathandi, singabangani, siyizakhamizi futhi siyizakhamizi. Futhi lobo budlelwano obuhluke kakhulu nohulumeni njengomkhokhi wentela, okukhombisa ukuthi uhulumeni umayelana nokuthenga inkampani enikezela ngosizo.
Ngoba izakhamizi zivota abantu futhi izakhamizi zizinikele nsuku zonke ukwakha idolobha lazo. Lokhu kwenziwa yizakhamizi, okwenziwa abahlali, okwenziwa omakhelwane, okwenziwa abangani, yilokho esikwenzayo, manje ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokubuyisa lolo limi, futhi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokubuyisa ukuzibophezela kwethu ekwakheni idolobha elikhulu, futhi ngizokutshela ukuthi ngeke. Basho njalo! Into yokuqala abazoyisho ukuthi azikho.
Noma, ngokwesibonelo sokuqagela, othile eshiya uhulumeni ngensalela enkulu (insini), lowo ozomlandela esikhundleni sakhe uzothi kunokusilela okukhulu, cishe isigidigidi samaRandi. Ngakho-ke asikwazi ukukwenza, asikwazi ukukwenza ngihlala ngitshelwa ukuthi ngeke. Akulona iqiniso.
Futhi ngizokhomba isibonelo ngenkathi ngiyiMeya, kepha kuningi. Futhi hhayi nje ngenkathi ngiyiMeya. Uma singakwazi, kungani pho? Sinohlelo lomtapo wolwazi oluhamba phambili emhlabeni wonke lapha eToronto? Siyakhe, izizukulwane zabahlali baseToronto abazinikele bakha lolu hlelo lomtapo wolwazi womphakathi.
Kungani sinakekela izingane? Ezikoleni, kulo lonke idolobha? Izizukulwane zaseToronto zakha lokhu kunakekelwa kwezingane. Kungani sinesistimu yokuhamba? Izizukulwane zabahlali baseToronto bakwenzile lokhu. Izakhamizi zaseToronto nezakhamizi bakha lolu hlobo lwedolobha.
Futhi sakwenza ngenkathi ngiyiMeya. Futhi elinye lamalungelo onawo njengesikhulu esikhethiwe ukuthi abantu bakhulume nawe, bakutshele amathemba abo, amaphupho abo nezifiso zabo futhi kwesinye isikhathi nabo bakutshele ukuthi unephutha. Kepha lokho kulungile, leyo yingxenye yakho.
Futhi ngikhulume ngokoqobo namashumi ezinkulungwane zabantu njengemeya yaseToronto nombono ofanayo lapho ngigijimela imeya yaleli dolobha elikhulu. Ngaphandle kwezombusazwe zabo, babefuna ukuhlala edolobheni elalakhiwe ubulungiswa bezenhlalo, idolobha lokulingana, njengedolobha engafika kulo ngo-1981. Wawufuna ukuhlala edolobheni elinenani eliphakeme lezemvelo, ufuna ukuhlala kulo idolobha lempumelelo nethuba, futhi okubaluleke kakhulu, idolobha lapho kungasalanga muntu khona.
Lokho kwakuyizindinganiso esazama ukuzenza ezinqumweni zethu ngenkathi ngiyiMeya yaseToronto, futhi bonke bahlangana ngephrojekthi eyodwa. Futhi nonke niyazi le phrojekthi ngoba ngakhuluma ngayo, futhi yiTransit City leyo. Wonke la magugu ahlangana ndawonye kulo msebenzi wezokuthutha zomphakathi.
Kungani? Ngezizathu eziningi. Okokuqala, iTransit City yeza kuphela ngoba senze isibopho ngokuhlanganyela. Okwesibili, iTransit City akuyona eyokuhamba.
Vele kubalulekile, kunenethiwekhi eya kuzo zonke izindawo ezikuleli dolobha nakuwo wonke amakhulu Idolobha elinabantu abaningi linenethiwekhi ye-S-Bahn, hhayi eyodwa noma emibili imigqa yeS-Bahn, inethiwekhi eyodwa. Le ukuphela kwendlela abantu abangaphuma ngayo emotweni baqhubeke nokushayela: ngenethiwekhi. Futhi le nethiwekhi ingena kuzo zonke izindawo futhi inika abantu lokho kukhetha nalelo thuba.
Ngakho-ke futhi kumayelana nemvelo nokuthuthwa, kepha kumayelana nokunye okuningi. Imayelana nemisebenzi, imayelana nokwakha iTransit City, izimoto, iThunder Bay, izingxenye ezithunyelwa kulo lonke elaseNingizimu-ntshonalanga ye-Ontario, futhi kumayelana nemisebenzi eye yakhiwa lapho sikhula bona ukuthi eToronto kuyo yonke le migqa lapho kuzoba ukukhula futhi uzothola utshalomali lwezinkampani ezizimele futhi uzothola imisebenzi futhi uzothola idolobha elizokhula ngaphakathi kwalo hhayi elandayo elizosiza imvelo. Kepha lokho akuyona into ebaluleke kakhulu ngeTransit City.
Into ebaluleke kakhulu ngeTransit City ukuthi imayelana nobulungiswa bezenhlalo. Imayelana nokubandakanya abantu abakhelene naleli dolobha abangahlali nethuba, abahlala ezindaweni ezikhungethwe ubumpofu, uhlobo lomakhelwane engicabanga ukuthi akekho noyedwa wethu owayelindele lapho sifudukela eToronto ngaqala ukulibona. NgangiseSheppard East Bus ngenkathi siqala nje ukwakha iSheppard LRT ukukhuluma nabantu kulolo layini.
Ngahlangana nowesifazane futhi ngicabanga ukuthi igama lakhe kwakunguDonna. Futhi wangitshela ukuthi wenzeni. Wahamba namabhasi amabili waya esitimeleni esingaphansi kweSheppard, wagcina ngesitimela esingaphansi sakwaYonge waya ebhasini iFinch, waqonda emsebenzini.
Kuzothatha ihora nesigamu. Ngemuva kwalokho uthathe ibhasi lakwaFinch wabuyela kuloliwe ongaphansi komhlaba wakwaYonge, kepha akazange aye ekhaya. Ngoba njengabantu abaningi bakule ndawo, wayenemisebenzi yesikhashana.
Wayedinga lokho ukuletha ukudla emndenini wakhe etafuleni. Waya edolobheni, waya ehhotela, ngomsebenzi wakhe wesibili. Yabe isibuyela kuthubhu yalandela enye ishubhu, yalandela iScarborough RT nenye ibhasi.
Futhi ngayeka ukubala, kepha kumayelana namabhasi amane nezitimela ezihamba ngaphansi komhlaba ezinhlanu ku-RT ukufika nje emsebenzini. Cabanga ngoshintsho empilweni yakhe uma engahlali ebhasini ezimotweni ezixubile okungukuthi ngokwencazelo isevisi ayilindeleki futhi ihamba kancane ngoba njengawo wonke umuntu ibambeka ngehora lokujaha, ukwazile ukuthatha ujantshi wesitimela osheshayo Ukushayela eyedwa ngendlela yomdabu, wayezonga ngokoqobo amahora empilo yakhe masonto onke namakhulu amahora ngonyaka. Amahora azomvumela ukuthi athole umsebenzi ngokugcwele noma mhlawumbe abuyele esikoleni athuthukise amakhono akhe noma mhlawumbe achithe isikhathi esithile nomndeni wakhe.
Kubaluleke kakhulu ekuhlanganisweni komphakathi kwedolobha lethu. Futhi kwenzeka kanjani iTransit City? Bekungeyona nje ukushaya ngoba bengigijimela ihhovisi lemeya endaweni yesikhulumi seTransit. Kusebenzile ngoba abantu baseToronto bazibophezele ekuhlangabezaneni nezinselelo zethu zemvelo nezokuthutha.
Sazibophezela ngokuhlanganyela, kwaphela iminyaka abantu bekhuluma nabangane babo ngokuwa kwezimoto ezindaweni zokudlela nasemsakazweni wezingxoxo. Asizange sakhe iS-Bahn? Ngizwile yonke indawo. Kungani singayakhanga? Ezizukulwaneni ezimbili? Wonke amadolobha amakhulu anezitimela zabagibeli, kungani singenjalo? Futhi abantu babe nale ngxoxo.
Futhi bakhulume nosopolitiki babo futhi babhala izincwadi futhi iChamber of Commerce yalicosha, okuyinkinga yokuqala yebhizinisi edolobheni. Futhi umkhandlu wabasebenzi kanye nokungenzi inzuzo, futhi sonke sizibophezele. Futhi sazibophezela ngendlela eyaletha izikhulu ezikhethiwe endaweni yesehlakalo.
UNdunankulu uMcGuinty, ngoJuni 15, 2007, wamemezela izimali ezigcwele zeTransit City. ngiyobe ngigcwalise ngokuphelele ngo-2020, futhi ngiyalukhumbula lolo suku ngoba bekuwusuku lwami lomshado futhi ngiyaqiniseka ukuthi isikhulumi esedlule besingeke sikunikeze iseluleko sokubiza umlingani wakho sithi, 'Ungathanda ukuchitha usuku lwakho lomshado egalaji lebhasi eMississauga? ' (Uhleko) Akunandaba ukuthi ugqokeni. (Uhleko) Akukho kumanothi ami! (Ukuhleka) UNdunankulu uzibophezele, uNdunankulu uPaul Martin uzibophezele.
Amaphephandaba aba sematheni amakhulu: “Isikhathi sesivumelwano esisha sedolobha! Sonke sizibophezele! ”Amabhiliyoni athembiswe uhulumeni wesifundazwe, uhulumeni wesifundazwe, uhulumeni wedolobha. Sathenga amabhasi, saqala ukwandisa isibalo sabagibeli, futhi sasungula iTransit City. Ngoba besizinikele.
Sonke. Futhi kwenzekani ngokulandelayo? Ngokubambisana. Sasikuthatha njengenhlonipho.
Isabelomali sika-2010, ukuqhuma kwaqala. UNdunankulu uMcGuinty umemezele ukuthi kuzonqanyulwa imali yeFinch Line. Ulayini weFinch! Lokho kuya kuJane naseFinchand Racks kwezinye izindawo, lapho abantu bemi khona emigwaqweni nsuku zonke ukubamba ibhasi leFinch.
Abantu abadinga isitimela esiphuthumayo ngokushesha. Izokhanselwa. Kwenzekani? Isibonelo, iBhodi Yezokuhweba, ihlola ukubaluleka kweTransit City, yathumela umbiko kwabezindaba: 'Asivumelani.' Athule.
Ngokubambisana sikuthathe kalula ngoba besingazimisele. Sasizibophezele iminyaka eminingi, sasicabanga ukuthi siphumelele kanti akunjalo; ngesikhathi lapho kufanele sisho okuthile ndawonye, ​​asizange. Manje sesibonile abantu bephakamisa amazwi abo, sesibonile okwenzekile eCity Hall emasontweni edlule futhi abantu bakhulume bathi, 'Cha!' 'Asiwufuni umuzi onjalo!' 'Asifuni ukuthi imitapo yolwazi ivalwe!' Asifuni amasondo akwaFerris! (Ukuhleka) Ngicabanga ukuthi yilokho abakushilo. (Uhleko) Futhi kuhle lokho.
Kepha njengeTransit City, ngeke sikuthathe kalula ukunqoba; kufanele sizibophezele. Ngoba uma ungathengi idolobha, awulisebenzisi. Uzakha nsuku zonke.
Futhi kuyisibopho. Futhi uma ufuna idolobha elikhulu, futhi uma sifuna idolobha elikhulu, kufanele sizibophezele esifanayo. Kulula ukwazi esingakufuni, kunzima ukwazi ukuthi sifunani.
Futhi lapho, lapho siyithola, sidinga ukuphakamisa amazwi ethu nsuku zonke. Futhi uma sifuna ngempela ukuthi izwi lethu lizwakale, kufanele sibuyele esihlokweni engisishilo ekuqaleni. Lesi sihloko sichaza ukuthi singobani.
Kusukela uRonald Regan noMargaret Thatcher, ilungelo eliqine kakhulu lichaze i-US njengomthengi kahulumeni. Lokho kwenza uhulumeni into ehlukile kithina. Singabakhokhi bentela, siyadla futhi siyabathenga! Kepha akusikho lokho uhulumeni akhuluma ngakho! Uhulumeni umayelana nokuthi sonke sihlangane ndawonye ngoba singabahlali futhi siyizakhamizi ezihlangana ndawonye ukudala umbono ofanayo nokwenza lokho kwenzeke.
Cishe nsuku zonke. Futhi sidedele lolu limi lusuke kithi. Kwenzeka ngaso sonke isikhathi, ku-CBC, kuseNkanyezi, kusembulungeni, kunjalo, kuseNational Post! (Ukuhleka) Ngizoba ngumuntu wokuqala namuhla ukukhuluma ngeToronto Sun. (Uhleko) Kukuyo yonke indawo.
Futhi sekuyisikhathi sokuthi siphakamise amazwi ethu, njengoba nje sidinga ukuzibophezela edolobheni lethu, ukuzibophezela ezimisweni eziyinhloko zaseToronto: ukufakwa komphakathi, ukuchuma, ikhwalithi yempilo, amazinga ezemvelo, ezokuthutha zomphakathi ezinhle, amapaki amahle omphakathi , izinsiza zomphakathi ezinhle. Hhayi lousy, kuhle. Yilokho esikufunayo, yilokho okusifanele, yingakho sakha idolobha elikhulu futhi kufanele futhi sizibophezele olimini olufanayo.
Futhi ngicela ukuthi wenze izinto ezimbili ngemuva kwe-TED: hhayi nje ukubhala i-imeyili uma kunenkinga ngedolobha noma omunye uhulumeni, uzihlele, ube nabanye futhi uzibandakanye Ukuhlala endleleni, ukuzibandakanya, ukuba lapho nabangane bakho futhi ozakwabo nokuzibandakanya. Lokhu kungokokuqala. Okwesibili ukuguqula inkulumo yethu ngoba imayelana nathi.
Uma ngabe i-CBC isho okuthile ngabakhokhi bentela, thumela umyalezo nge-imeyili, uthi lolu wulimi oluhlukanisayo. Ngizwile abantu emibuthanweni yomphakathi evela kubantu abahola kancane abathi, 'Angiyena umkhokhi wentela!
Ngabe uDavid noMillar bahlobene?
YenauyaphilaeGirona, eSpain, nomkakhe, uNicole, nezingane zabo ezintathu, u-Archibald, uHarvey noMaxine.
Ifilimu entsha kaDavid Millar, iTime Trial, isanda kukhishwa emhlabeni wonke, futhi ukubungaza lelo qiniso, singaya emathangeni nendoda uqobo, sikhulume ngokugibela ibhayisikili, futhi siqonde umongo wokuthi kudingekani ukushesha. Ingabe ubuciko noma yisayensi? (umculo onamandla) - Kunomugqa omuhle kakhulu phakathi kobuciko nesayensi. Uma ufuna ukuthola okuhle ngesikhathi sokuvivinywa kwesikhathi, iya esivivinyweni sesikhathi.
Ukuphela kwendlela yokuthola inzuzo ukuthola okuthile abanye abangazi ngakho. Cabanga ngakho njengetafula elibekiwe futhi une-arsenal yezikhali. - Ngifisa sengathi ngabe saba nale ngxoxo eminyakeni engama-20 eyedlule. - UDavid, okokuqala kunakho konke, ngiyabonga kakhulu ngokusazisa ngemigwaqo yangakini yaseGirona.
Ifilimu uqobo luyisibuko sesizini yakho yokugcina njengochwepheshe, akunjalo? - Yebo, ngisho ukuthi, kwenzeke ngokuzenzakalela ngoba sihlele ifilimu kanjena. Kwaphela iminyaka eminingi siphelelwa yisikhathi. Ukube asizange siyidubule kulo nyaka, besingeke sibe nayo.
Kepha ekugcineni bekukuhle ngoba bekuyisizini yokugcina futhi kuyiqiniso ngempela p Akusona isithombe sangempela sokuthi kunjani ukuba umgibeli wamabhayisikili okhokhelwayo lapho kuningi khona okushaya ikhanda, udumo oluncane kakhulu, futhi empeleni kuwumsebenzi umbukeli usekhanda lami isizini yonke yomjaho futhi ngizwa imijaho yebhayisikili ngamehlo ami - Yebo, kufanele kube mnyama kakhulu, ngicabanga, ngoba kunjalo, njengoba usho, njengomsebenzi kuwumsebenzi onzima impela. - Yebo, kubi kakhulu futhi yilokho ebesikufuna.
Besifuna ukuthi ithembeke kakhulu, ithathe okungokoqobo. Futhi yebo, kunezinto eziningi ezinhle futhi ngumdlalo omuhle, kepha futhi kunezinto eziningi zansuku zonke, uma uthanda, nokuningi okujwayelekile ngokuphelele. Kuyamangaza ukuthi ijwayela ukushesha kangakanani lapho ukuyo. - Yebo.
Ngakho-ke esikhathini esidlulile kusukela kusizini yakho edlule, ngabe uke waba nesikhathi esiningi noma wenza ukuthi ucabange ukuthi uzenza kanjani izinto lapho? ngubani othande izinto ezincane zomjaho, shayela ngokushesha? - Yebo kancane. Ngisho ukuthi yinto engicabanga ukuthi iya ngasekupheleni komsebenzi wami ngiqale ukucabanga kabusha okuningi. Konke kwashintsha emsebenzini wami selokhu ngaphenduka i-pro ngo-1997, lapho amamitha kagesi, yize ayekhona, ayengavamile kakhulu.
Kuvame ukubonwa okuyisisekelo. Futhi ngaphezu kweminyaka engama-20, uchwepheshe omuhle weminyaka engu-18, iminyaka engama-20, uma uthanda, selokhu ngaqala eFrance lapho ngiqala yonke into yashintsha. Kuqhutshwe kakhulu idatha.
Isayensi yayiqashelwa kabanzi lapho cishe kwakuwubuciko obumnyama ngaphambi kwalokho, futhi kwakudingeka wazi umqeqeshi ofanele owayenezindaba zezalukazi. Ngikushintshe ngokuphelele lokho. Futhi uma ngikhuluma iqiniso, okuhle ekugcineni ukuthi ngifunde okuningi ekuqoqweni kwedatha ezintweni engizifundise zona, imvelo yesibili uma uthanda, nangokusebenza kanzima nangokuhlola i-Back yami, yonke idatha iqoqiwe - Ngempela? - Kwenelisa kakhulu - Yebo, zinhloboni zezinto lezi? sikhuluma ngani? - Ngicabanga ukuthi angikaze ngikuthande ngempela ukushaya kwenhliziyo noma amandla kumashadi wesikhathi.
Lokhu kuyangiphazamisa. Bengishesha kakhulu. Ngakho-ke lapho sikhuluma ngokuthi ungashesha kangakanani lapho kufanele uthi kufanele usuke endaweni engu-A ukhombe B ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka, ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayabambeka, kulungile, kufanele nginamathele kulokho feat, nami kufanele ngilinganise lawo mandla, lelo cadence, lokho kushaya kwenhliziyo, okuyiqiniso, ekugcineni, uma wenza kanjalo, izibalo ngaphambi kokuthola isilinganiso zimile kulowo mugqa.
Kepha kukhona ukwehla nokwehla phakathi nomcimbi. Bengihlala ngenza izivivinyo zesikhathi sami ngaso sonke isikhathi, okuningi ngohlobo lwendlela yokukala lapho konke ngangisuselwa kusivinini. Ngakho-ke uma bekuzohamba kancane ngizozama ukushayela ngamandla.
kungani inyama esetshenzisiwe imbi
Ukube bekuhamba ngesivinini, lapho nje sengineminyaka engaphezu kwama-50 km ngehora, bengizifaka ebholeni eliqinile impela bese ngicishe ngicime ugesi bese ngithatha isivinini nami. Okwamanje yehlisa ijubane, bengizokwakha ingcindezi yangempela futhi okusho ukuthi uma ubheka igrafu ngemuva kwalokho, bekukhona iziqongo ezigodini. Njengoba ijubane landa, ugesi wehla.
Futhi njengoba ijubane lamandla laliyehla, amandla ayenyuka. Futhi uhlala ubona lezo ziqongo ezincane nezigodi ngomcimbi ogcina ulungile. - Yebo, ngiqonde ukuthi usho? lokho kusebenze ne-physiology yakho ukwehluka ngamandla anjalo? - Ngicabanga kanjalo ngoba ngithole ukululama okuhle kakhulu nokubekezelelana okuhle kakhulu kwe-lactate ukuze ngikwazi ukuzishayela ngibomvu.
Ake sithi lo mgwaqo lapha. Uma ngabe kunesikhathi lapho uzama ukwehla kulokho okuhamba ngesivinini esikhulu ungavele usishaye ngamandla ngangokunokwenzeka, ngakho-ke zama ukungalahli isivinini, okungasho ukuthi usezingeni eliphakeme kakhulu futhi usendleleni yokuthola umkhawulo obomvu bengizokwazi, ngoba ngibe nokucaciswa kwami ​​ukuthi kuzokwehla ngemuva kwalokho, ngangazi ukuthi nginalo leli phuzu lokululama. Ngakho-ke kungaba ngokujula ngangokunokwenzeka, ukwenyusa ijubane, ukuqhuma phezu kwalo, ukulinqwabelanisa bese unyamalala nje, bese uphumula.
Ibushelelezi kahle ku-TV noma ngabe ibukeka kanjani, kepha empeleni isebenza ngaphakathi kuyo yonke indawo. Umzamo wami ozwakalayo lapha ubungasondela ku-10. - Ngabe ucabanga ukuthi lokhu kungaba yinto ezosebenzela abantu abaningi? - Yebo, ngicabanga ukuthi kunjalo.
Ngicabanga ukuthi ngamunye wethu wehluke kakhulu. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kaningi okukhohlwayo ukuthi wonke umuntu une-physiologies ehlukene, izinhlobo ezahlukene zomzimba, futhi kufanele ukuhloniphe lokho. Yingakho angikholelwa emithethweni ejwayelekile, konke kwenzeka ngokushesha esivivinyweni sesikhathi.
Kufanele uphume, uzijwayeze izinto eziningi ezahlukahlukene, isivivinyo nephutha, ikadidi, ukulethwa kwamandla, amasu ngendlela ogibela ngayo umzila ngoba yonke imizila yehlukile futhi wonke umuntu wehlukile. Uma usendleleni eyisicaba futhi ungumgibeli, khona-ke kufanele uyishayele ngokuhluke ngokuphelele, umzila oyisicaba, njengokungathi ubukhuphuka izingcezu zokuqwala, kuyilapho umgibeli efulethini kuzodingeka ngempela aye ngalé kwakhe futhi asebenzise izingqimba cishe ezokungcebeleka, okuyimisindo engajwayelekile. - Yebo, lokho cishe akunembile.
Lokhu akuphumeleli ekudlaleleni amandla akho, kwenza okuphambene - Cha, akunjalo, ngakho-ke ngibona kahle lokhu kwanda okuncane lapha ebengikuvivinya ngesikhathi, uma kukhona igquma elinzima ngingacabanga ukuthi nguwe umgibeli wezintaba bekufanele ngishaye ngesikhathi sokuqulwa kwecala. Usheshe wasuka kimi. - Unomcabango omuhle.
Nginesiqiniseko sokuthi ngizobuya - ngakho-ke ngicabanga ukuthi umqansa ungathi ngidansa kude nami bese ngicabanga, KULUNGILE, ungethuki, ungatatazeli. Uyambuyisa. Uyambuyisa.
Ngakho-ke ngizovele ngiqiniseke ukuthi ngihambisana namakhono ami ekukhuphukeni ngakho angizange ngithuke ngijule kakhulu, bese ngifika phezulu bese ngishesha nje. Bese kuthi lapho ngibe nesithombe ekhanda lami lalokhu okhuphuka ekwehleni bese ngifinyelela ethafeni bese ngiqala ukubabuyisela emuva bese ngihamba ngaphesheya kwabo. Lapho-ke noma ngubani olandelayo, babezobuyela kimi.
Ngakho-ke benginomoya ongapheli ekhanda lami ozwakala uxakile impela, kepha bekuyindlela enhle impela kimi ukuthi ngingatatazeli noma kungenjalo enkambeni yamagquma ngempela bengizocabanga ngaso sonke isikhathi, oh umqansa uzongibulala. Ngakho-ke esikhundleni sokucabanga ukuthi, ngizoya, KULUNGILE, ukukhuphuka kuzongibulala, kepha mina ngiyobabulala yonke indawo. Uhlala uhlala kulolu hlobo oluhleliwe lokwenziwa kwemephu yengqondo, ukwenza imephu yomjaho.
Kuhle ngoba kukuphazamisa nakulokho kuzikhandla futhi. Esikhundleni sokugxila ngokuphelele futhi okhathazeke kakhulu ngawe, wena ngidinga ukuphrojusa lokho abanye abantu abakwenzayo nabakucabangayo. Futhi-ke ungabhekana nengcindezi, ngicabanga, ikakhulukazi kimi.
Ngakho-ke leyo kwakuyindlela yami. Kuyinto engiyifundile ngokwesaba, ngakho-ke ngangihlala ngicabanga ukuthi abanye abantu benzani. Ngakho-ke esikhundleni sokuvumela ukuthi ngibuswe, ngaqala ukuyisebenzisela inzuzo yami futhi ngagxila lapho engingabashaya khona, lapho engangicabanga ukuthi bazohamba kancane kunami - ngoba ngicabanga ukuthi kuvame ukubonakala sengathi lapho abantu bekhuluma isikhathi eside mayelana ijubane noma yikuphi ukuzikhandla okude, noma ngabe kuyisimo semidlalo noma sesikhathi, kuhle kangakanani, kufanele ukusikhiphe bese usuka ku-A uye ku-B ngokushesha okukhulu, kepha kucishe kufane nokudlala nalezi zinhlobo zamasu wokubona ingashintsha ijubane lakho.
Ngabe kunjalo, akunjalo? ku, zisuka ku-A ziye ku-B KULUNGILE, kufanele ngihambe phakathi kuka-A kuye ku-B ngokushesha okukhulu. Cha, ngakho-ke lawa ngama-semantics angalungile, kepha kufanele usuke ku-A uye ku-B ngokushesha okukhulu, okusho ukuthi bonke abashayeli bazoba namakhono ahlukile kuleli banga. Ngakho-ke kufanele uthole ukuthi i-physiology yakho ithini, ukuqeqeshwa kwakho kukuvumela ini, futhi ukukhulise kusuka ku-A kuye ku-B, yingakho imfundo ibaluleke kakhulu ukwazi le nkambo ngokujula, ukuze ukwazi ukuyishayela ngokwamandla akho .
Yazi ukuthi uzoyithola nini izingqinamba okufanele ucindezele kuzo futhi uphumelele, wazi ukuthi uzoba naziphi izigaba lapho unganciphisa khona umonakalo owenziwe abanye abashayeli. Ngicabanga ukuthi le yinto uhlala udinga ukuyikhumbula. Ungakwazi ukugibela kuphela ngokushesha okukhulu ongakwenza ukuqeqesha ngqo lolu hlobo lokugibela? Ngiqonde ukuthi, ukuthole lokhu ngoba lokho kuzoba yinto yakho nokuthi wenzeni ukuze usebenze kangcono? - Ngithole indlela engcono kakhulu yokufunda isivivinyo sesikhathi empeleni ukukwenza isikhathi eside kangako.
isilinganiso sesisindo samandla
Ngiqonde ukuthi, izikhawu zilungile, imizuzu emine ivuliwe, ikhefu elilodwa, noma imizuzu eyi-10. Kepha eqinisweni, ufunda futhi ufundisa umzimba wakho hhayi nje ukwenyama kepha nezindlela zokusebenza kwengqondo ngokwenza ibanga. Futhi yingakho izivivinyo zesikhathi zibukeka njengemayini yegolide, wenza kuphela ukuguquguquka kweklabhu, masonto onke, amabili noma amathathu uma ufuna.
Futhi yile ndlela oyihola ngayo. Ukuqeqeshwa kwesikhawu kuhle, kepha uma ufuna ukuthola okuhle ngesikhathi sokulingwa, yenza isivivinyo sesikhathi. - Kulungile. - Futhi gxila impela.
Bese uxoxa nawe. Bala lokho okwenzile, lapho ungahambanga kahle khona, lapho ugijimele khona kwesokudla, kodwa okubaluleke kakhulu, impela, lapho wenze iphutha khona. Ngoba akuvamile kakhulu ukuthi wenze isivivinyo sesikhathi esikahle - ingabe kungubuciko obungaphezulu kwesayensi? - yebo, ngisho, ngicabanga ukuthi kukhona umugqa omuhle kakhulu phakathi kobuciko nesayensi.
Lapho usuqede wonke umsebenzi onzima futhi wenze konke ukuqeqeshwa, ukulungiselela ngokwengqondo nokulungisa isimo, ushayela kuwo wonke amagiya akho, konke okufana nalokhu. Ngisazikhumbula izinsuku lapho ngangigoqeka ekuqaleni futhi ngazi ukuthi ngangikwenze kahle konke. Ngangikuphothule ngokwengqondo konke ukulungiselela kwami ​​emahoreni amabili noma amathathu ngaphambili - Ngabe ucabanga ukuthi kubalulekile ukuthi unakisise imishini yakho ngo-2018 njengaku-2008 nango-1998? - Impela akunzima kangako manje.
Wonke umuntu, wonke amaqembu, anamabhayisikili e-TT, futhi manje wonke umuntu unezikhundla ezinhle. Wonke umuntu unamasondo ahamba phambili, amathayi amakhulu, ama-ceramic bearings yonke indawo. Ngicabanga ukuthi akumnandi kangako ngoba ingxenye yeThe Fun For Me ibicwaninga konke lokhu futhi ijaha konke lokho e bits and bobs - yebo, ngiqonde ukuthi, uma kukhona umuntu ofuna umphetho manje, ubhekephi ngaleso sikhathi ? Ngabe inesayikholoji kubaluleke kangakanani? - Yebo, ukuthola inzuzo ngokwenza okuthile okungcono noma ngokuthola okuthile abanye abantu abangazi ngakho.
Nginesiqiniseko esihle sokuthi isizathu sokuthi ngibe nomsebenzi omuhle kangaka wesivivinyo, ikakhulukazi lapho ngisaqala, yingoba ngizame kanzima endaweni engcono. Nginakekele amabhayisikili ami kakhulu. Ngibhekile, futhi lokho bekungukuhlanganisa okukhulu ngenkathi okuningi kukuqeqesha manje, kuphinwe kahle phansi, wonke umuntu laphaya unamabhayisikili amahle.
Manje yini engenziwa ngabantu? “Ngiyangabaza ukuthi abantu abaningi bahlola umkhondo ngendlela efanele noma benza uhlobo oluthile lomqondo wokumaka isifundo. - Ngicabanga ukuthi uChris Froome udinga usizo ngezibalo zakhe zesilingo sesikhathi. - Hhayi-ke ngicabanga ukuthi akanankinga, unoTim Kerrison e-cartel emtshela kahle ukuthi kufanele aye kuphi nokuthi enzeni. (ehleka) Akudingeki achaze - mhlawumbe lokho kwamhambela kabi eGiro. (ehleka) - B Kepha ngicabanga ukuthi yilokho kuphela.
Ngicabanga ukuthi ithola okuthile ongakutholi. Ngakho-ke uma uthola ukuthi awufundisi, qala ngokufundisa. Uzohamba ngokushesha okukhulu.
Uma ungayiboni ngeso lengqondo inkambo futhi usebenzise amasu ahlukene ngokwengqondo, lokho kusho ukuthi kukhona ongakengeza ku-arsenal yakho. Futhi kufanele ucabange ngaleyondlela. Cabanga ngakho njengetafula elibekiwe futhi une-arsenal yezikhali.
Ziqeqeshe lapho futhi unomqeqeshi ongakusiza ngokomqondo. Unebhayisikili lakho, unezingubo zakho, unemfundo yakho. Ngakho-ke zonke lezi zinto zilungiselelwe.
Ingabe wenza zonke lezi zinto zibe ngcono kakhulu? yamakhono akho? Futhi uma kungenjalo, kusho ukuthi ungathuthuka. - Ngifisa sengathi ngabe besinayo le ngxoxo njengeminyaka engama-20 eyedlule. Akukhona ukuthi bengingenza okuningi ngokwengeziwe kimi, kepha uyazi.
Ngicabanga ukuthi angizange. (umculo okhululekile) Hawu, hlola le ndawo. Ngabe ufuna ukuyobhukuda nami - Ukubhukuda kubukeka kukuhle, akunjalo? - Awu, David, ingabe leyo ndawo impela? okwe cafe st op.
Sikuphi ngempela? - Leli yidolobha laseBanyoles elin Ichibi. Lokhu empeleni kuyiluphu lokuthola kabusha lochwepheshe abaningi abavela eGirona. Kuyimizuzu engama-40 kuphela ukushayela lapha, ikhefu lekhofi, imizuzu engama-40 ukushayela emuva. - Kuhle, kupholile kakhulu.
Ngakwesokudla, nikeza le ndatshana isithupha esikhulu. Ngiyabonga David ngale ngxoxo futhi ubuke ne-Time Trial. Ngiyazi ukuthi ngizobuya maduzane.
Ngizobuyela kuwe. Ngakwesokudla, uma ufuna ukubuka i-athikili manje, u-Emma uhlolile ukuthi imigoqo yesivivinyo sesikhathi esisheshayo ishesha kangakanani ebhayisikili lomjaho. Okuthile okubhekwe ngabomvu emehlweni akho? Vele, kunjalo - Kulungile. (Ehleka) Kulungile, i-athikili ingezansi nje, kuhlole.
Kwenzekani kuDavid Millar?
URobert Millarwenza impilo yami yaba lula kakhulu, impumelelo yakhe, kanye negama lomndeni esabelana ngalo (igama elisebenza ngokungajwayelekile kuzo zombili iziFulentshi neSpanish) kwakusho ukuthi ngangihlalaezihlobenekuye noma umane abizweURobert, UMeelaar wazizwa ejwayelekile kubantu. Nokho angisiyeURobert, NgiUDavid. Ngikwazile, Pippa, iminyaka embalwa manje.7. 2017.
Ngabe uDavid Miller wayegqoke ophuzi?
Abagibeli baseBrithani okufanele babe nabokugugileeyomholiophuziijezi eTour de France:UDavid MillarNgo-2000. Ngo-1995, ngineminyaka eyi-18, futhi ngemuva kokubhalisela ikolishi lobuciko lendawo eMaidenhead,Izinkulungwaneuthathe isinqumo sokubeka inhlanhla yakhe ezwenikazi futhi wajoyina iklabhu yamabhayisikili eSt-Quentin.3. 2014.
Bayazi amagama abo okuqala neminyaka yabo. Ngizokukhombisa ukuthi zazibukeka kanjani emuva ngama-90s nokuthi zibukeka kanjani namuhla ngo-2020.
Nazo-ke! ULieutenant Stephanie Holden wayeyintokazi enhle futhi engumqaphi onobuqhawe owayefaka impilo yakhe engcupheni nsuku zonke futhi asindise izimpilo ezingenakubalwa ogwini lwaseMalibu. Ekugcineni, ubuqhawe bakhe obungenabugovu babiza impilo yakhe.
Wayedlala ngu-Alexandra Paul. UCaptain Mitchell Buchannon ungunogada osemdala osethathe umhlalaphansi onikeza abanye imisebenzi yabo, aqeqeshe abantu abasha futhi ahlele izindlela ezintsha zokusindisa impilo. Ungumngane omuhle wabanye abasindisi.
UMitch uvezwe nguDavid Hasselhoff. UShauni McClain (odlalwa ngu-Erika Eleniak) ube ngumqali ngesikhathi eqala eBaywatch. Wayehlala esaba ukuthi abantu bazominza futhi bafe iqhwa.
Wabekwa ngaphansi kwephiko lomsindisi onolwazi uJill Riley, futhi kwaba ngalesi siqondiso lapho uShauni aqiniseka khona ngamakhono akhe. UHobie Buchannon uyindodana kaMitch Buchannon noGayle Buchannon. Le filimu iveze ukuthi uHobie wayethanda ulwandle nolwandle futhi, njengoyise, wayefuna ukuba ngumlondolozi.
Unina kaHobie, noma kunjalo, wayephikisana nakho. UHobie uvezwe ngumlingisi uJeremy Jackson. UMatthew 'Matt' Brody wayengunogada weBaywatch enezinwele ezimnyama, ezimfushane kanye nesilevu esiqinile.
Unesimo esikahle kakhulu, esimenza afaneleke kahle emisebenzini yakhe yokulinda. UMatt wayengumsindisi wesibili obekwe icala lokuhlukumeza ngokocansi. Wayedlalwa nguDavid Charvet.
U-April Giminski (Kelly Packard) wayeyintombazane ekhangayo ezacile enezinwele ezimfishane ezimhlophe. U-Ephreli uzinikele kakhulu emsebenzini wakhe futhi uzicwilisa ngokushesha lapho edingeka. Ubuye abe nenhliziyo enhle kubantu abakhubazeke ngokwengqondo noma ngokomzimba ogwini futhi abasize benze ubungani nabo.
UGarner Ellerbee ungumlingiswa oqanjiwe eBaywatch. Usebenze njengephoyisa ochungechungeni lwasekuqaleni ngezikhathi zonyaka 1 kuya ku-5 no-8 futhi wavela nakwi-spin-off. Waboniswa nguGregory Alan Williams.
Indima yokugcina yomlingisi kwifilimu iChicago Med (2019). UDonna Marco ungumlingisi ovela ochungechungeni lwethelevishini lwaseMelika iBaywatch kanye ne-spin-off yayo ye-Baywatch Nights. Ungowesifazane osemusha okhangayo kwezemidlalo oneminyaka engamashumi amabili nambili onamahlombe abanzi, izinwele ezimhloshana namehlo aluhlaza okwesibhakabhaka.
UDonna uvezwe ngumlingisi uDonna D'Errico. UCody Madison (David Chokachi) wayengumsindisi obalulekile, onozwela futhi onamancoko. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho angaba nenkani khona, abe nesifiso sokuvelela futhi abe nesankahlu.
Ungumbhukudi onekhono futhi unethemba lokuthi ngelinye ilanga uzokwazi ukubamba iqhaza kuma-Olimpiki. UNeely Capshaw ungumlondolozi obalulekile osebenza kanzima. UNeely ubedonsa amehlo, wayekwazi kahle lokho futhi wayengesabi ukukhohlisa abantu ngokubukeka kwakhe.
UNeely wayengowesifazane oqinile futhi ongusubathi onengqondo ebukhali. Waboniswa nguGena Lee Nolin. U-Newmie (Michael Newman) uyilungu eliqine kakhulu eqenjini labasindisi elihlala lishesha ukwenza okuthile lapho impilo yomuntu isengozini.
Mude, unemisipha futhi unamadevu. Ukhululekile kakhulu futhi uyindoda yesifazane. UJessie Owens (Brooke Burns) wayeyidayimane endaweni eyayidinga ukupholishwa; ngaphezu kwakho konke, wayedinga ukuqeqeshwa emakhonweni okuvikela.
Kepha njengomuntu othanda ukunqoba i-triathlete, u-lifeguard, nowesifazane onama-stunt, ukuqeqeshwa kwakhe bekuseceleni kakhulu, kubandakanya nokuqeqeshwa kwesisindo. ULogan Fowler uhlala esebenza ngokuzikhandla futhi wenza umsebenzi wakhe kahle. Yize ebengumvikeli obalulekile eqenjini, izinqumo zakhe zokuxhamazela nezobudedengu nokungalaleli ekubasindiseni azange zihlangane nabo.
ILogan ivezwe ngumlingisi uJason Simmons. ULani McKenzie (Carmen Electra) ukhuthele futhi unenhliziyo yegolide. Uyazi ukuthi udonsa amehlo, kepha akalokothi akuvumele ukuthi kuphazamise umsebenzi wakhe.
Akazange alilahle iphupho lakhe lokuba ngumdansi odumile futhi wabona abahlengikazi njengendlela yokuyixhasa. U-Eddie Kramer (uBilly Warlock) ungumlingisi ochungechungeni lwethelevishini iBaywatch. U-Eddie ujoyina abalingisi beBaywatch kusiqephu sokuqala ngesikhathi sama-rookie school noShauni McClain.
Kube sekuvela usizi ngesikhathi kushona umlondolozi uJill ngemuva kokulimala kanzima ngesikhathi ehlaselwa oshaka. UJason Ioane (Jason Momoa) uhlukumezekile lapho izisulu zakhe zibulawa noma zikhubazeka, njengoba kukhonjisiwe ngemuva kokugada iSandy Beach lapho udokotela oshonile okhubazekile ewashini lakhe ehluleka ukulalela izixwayiso zakhe, futhi kamuva omunye wabesifazane ushonela endleleni eya esibhedlela . USean Monroe ungumlingiswa oqanjiwe, umsindisi omude onesiqu somsubathi.
USean uvezwe ngumlingisi uJason Brooks. Umlingisi waseMelika waziwa kakhulu ngokudlala uSean Monroe kuBaywatch Hawaii. Wayeneminyaka engu-26 ngaleso sikhathi kule filimu, manje engu-54.
UMegan ungowesifazane omncane phakathi kweminyaka engamashumi amabili enezinwele ezinde ezinsundu namehlo ansundu. UMegan wayengumsindisi wase-Australia futhi eyisazi sezinto eziphilayo zamangqamuzana. Akwaziwa ukuthi wafika kanjani eBaywatch.
UMegan uvezwe ngumlingisi nomlingisi uVanessa Angel; manje uneminyaka engama-54. UJack 'J. D. ' UDariyu, omunye wabaqaphi bakaMalibu.
UJack unomdlalo, unesizotha kakhulu, mncane futhi uhlala ekulungele ukusiza. Ungumbhukudi omkhulu futhi uyisurfer. Ngaleso sikhathi wayeneminyaka engu-29 kule filimu futhi manje uneminyaka engu-51.
UJack uvezwe ngumlingisi uMichael Bergin. UJordan Tate ungunogada wokuqala waseBaywatch wase-Afrika kuthelevishini. IJordani yayizithanda kakhulu izingane futhi, ngasendleleni, kwakudingeka izisindise.
Ngaphambi kokushiya iBaywatch eyunivesithi, uJordan wayengumsindisi omuhle kakhulu. Wayedlalwa ngumlingisi nomlingisi uTraci Bingham. USummer Quinn (uNicole Eggert) wayengumdlali wezinkanyezi nompetha wokubhukuda edolobheni langakubo.
Wayengenankinga yokuthola ithuba lokuya eBaywatch Rookie School. Ngesikhathi sokuqeqeshwa, wayephila kahle emzimbeni, kepha wabhekana nobunzima bengqondo njengokwesaba izindawo eziphakeme. C.
J. Parker (Pamela Anderson) ungomunye wabahlengikazi ababaluleke kakhulu. Ukhuthele futhi ungena ngokushesha lapho isimo sidinga lokho.
UC J. akakaze angabaze ukusiza noma ngubani odinga usizo, kungaba ngabantu noma yizilwane, okuyisona sizathu esikhulu sokuba abe ngumsindisi.
UCaroline Holden (Yasmine Bleeth) unamandla, unesibindi, futhi uhlale ekulungele ukungena ekusizeni. Ekuqaleni, amakhono kaCaroline njengomlondolozi ayeshoda ngandlela thile futhi wenza amaphutha amaningi. Kodwa-ke, ngesikhathi nangesiqondiso esivela kudadewabo uStephanie, waba ngumqaphi omuhle.
Siyabonga ngokubuka! Uma ngabe uyithandile le ndatshana, sicela wabelane ngayo kumanethiwekhi omphakathi, njengayo futhi ubhalisele isiteshi!
UDavid Millar uvinjelwe nini?
Ngemuva kokugasela kwamaphoyisa endaweni yakhe yokuhlala eBiarritz kuveze imijovo ye-EPO,Izinkulungwanewavuma izidakamizwa kanyekwavinjelwaiminyaka emibili ngo-2004. Ngesikhathi ebuyela emjahweni,Izinkulungwanewaba ngummeli oqinile wokulwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa futhihaskuvame ukukhulunywa kakhulu ngokufaka izidakamizwa ku-peloton.
Yiziphi izidakamizwa uDavid Millar?
Ngaphansi kokubuzwa ngamaphoyisa aseFrance,Izinkulungwanekungekudala wavuma ukusebenzisa ukuqinisa ukusebenzaisidakamizwaEPO. Leli cala lizombona ehlawuliswa futhi enqatshelwa ukugibela lochwepheshe iminyaka emibili. Waphinde wathola ukuvinjelwa impilo yakhe yonke kwiBritish Olympic Association (BOA), waphucwa isicoco sakhe somhlaba.
Mangaki amaBrits awine iTour de France?
Selokhu kwasungulwa lo mncintiswano ngo-1903, isishiyagalolunyeEBrithaniabagibeliunayokuholele ukuhlukaniswa okujwayelekile kufayela le-I-Tour de Franceekupheleni kwesiteji ngesinye sezinguqulo eziyi-103 zeTourswaseFrance. Ukuphela konyaka we-2018Ukuvakasha, lokhu kulingana nezigaba eziyi-101 sezizonke.
Ubani umgibeli wamabhayisikili omkhulu kunabo bonke?
Kalula nje, u-Eddy Merckx yi-umgibeli wamabhayisikili omkhulu kunabo bonke. Le ndoda ibizwa ngeCannibal yayibizwa ngochwephesheukuhamba ngebhayisikilinjenganoma ngubani omunye futhi wanqoba yonke imijaho ebalulekile okufanele iphumelele.
Ngubani umgibeli omkhulu weTour de France?
UMathieu van der Poel usiqinisekisile isikhundla sakhe njengomuntu emhlabeniumgibeli wamabhayisikili omkhulu kunabo bonkengemuva kokuphumelela kwakhe kweSigaba 2 ku-I-Tour de France. Lokho kushiwo uSir Bradley Wiggins. Umdashi waseDutch uzuze umusa wokugibela okumangazayo phezu kokukhuphuka kabili eMur-kusuka-Bretagne ukuthatha ijezi eliphuzi.28. 2021.
Ngubani umgibeli wamabhayisikili ohamba phambili wase-Italy sonke isikhathi?
1. IFausto Coppi (1919 - 1960) Nge-HPI ka-73.19, iFausto Coppi iyona edlula zonkeumgibeli wamabhayisikili odumile wase-Italy. Umlando wakhe uhunyushelwe ezilimini ezihlukene ezingama-49 ku-wikipedia.
UDavid Millar uthathe umhlalaphansi nini emijahweni yomgwaqo?
UDavid Millar (owazalwa ngomhlaka 4 Januwari 1977) ungumgibeli wamabhayisikili ohamba umgwaqo osezingeni elifanele waseBrithani. Wagibela iCofidis kusuka ngo-1997 kuya ku-2004 noGarmin-Sharp kusuka ngo-2008 kuya ku-2014.
Zingaki izigaba anqobe ngazo uDavid Millar kwiTour de France?
Unqobe izigaba ezine zeTour de France, ezinhlanu zeVuelta a España nesigaba esisodwa seGiro d'Italia. Wayengumpetha womgwaqo kazwelonke waseBrithani futhi waba ngumpetha wecala lakazwelonke, womabili ngonyaka ka-2007. UMillar wavinjelwa iminyaka emibili ngo-2004 ngemuva kokuvuma ukuthi wayedla izidakamizwa ezazivimba ukusebenza.
UDavid Millar waba nini umgibeli wamabhayisikili okhokhelwayo?
Ngasekupheleni kweminyaka yama-1990 lapho uMillar eba ngumpetha, inhlalakahle yabagibeli yayihlanganisa nomjovo wamavithamini ongajwayelekile kanti uMillar wazithola ephonswa ekugcineni. Ubeneminyaka engu-20 nje kuphela, wasayina inkontileka yakhe yokuqala neqembu laseFrance iCofidis ngo-1997.